Honest Hacking (မြန်မာလို)
ညီလေး တစ်ယောက် ပို့ပေးလိုက်တာပါ ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေချည်း ဖြစ်တာကြောင့် မဖတ်မဖြစ် ဖတ်ပေးပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် . သန်းထိုက် (ရွှေရိပ်)ရေးသားထားတာပါ . အသေးစိတ် မဟုတ်ပေမယ့် သိသင့်တာတွေ ချည်းပဲ ချပြထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ . နယ်ဝေးက ညီအစ်ကိုများနှင့် နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ ညီအစ်ကိုများ ဖတ်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် . အောက်မှာ download လုပ်လိုက်ပါ .